iPhone VS Android: Kedu onye na-amasị Mma?
Dị nnọọ na-ike gwụrụ nke Android ekwentị na-awụlikwa elu mmiri iji iPhone? Echere m na eleghị anya ị na-achọghị ịhapụ ala ọ bụla scrap nke gị mkpa onye data n'azụ? A bụ otú ka abịa ihe niile, dị ka kọntaktị, music, photos, SMS, na ndị ọzọ si gam akporo ka iPhone enweghị ihe ọ bụla hassle. Dị na-agụ na.
Part 1. Android VS iPhone: Gịnị Ọdịiche ndị ahụ dị
Part 2. Extra Atụmatụ mgbe Ịmafe si gam akporo ka iPhone
N'ihi na nke dịgasị iche iche nke ngwaike eji dị iche iche gam akporo igwe, na ndụ batrị dịgasị. Ụfọdụ ikpeazụ a ogologo oge, mgbe ụfọdụ ndị mkpa-ebubo ọ bụla a di na nwunye nke awa, karịsịa mgbe ị na-egwu egwuregwu. Mụta ihe banyere Olee ịzọpụta ndụ batrị >>
Ọ bụ ike ikwu ma iPhone ndụ batrị bụ ogologo oge karịa Android ekwentị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ma dị nnọọ na-iPhone kwadoro, ọ nọruo ruo ogologo oge.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-egwu ngwa, nche fim, gị iPhone ga-atụfu ya batrị ụgwọ nnọọ ngwa ngwa. Atụmatụ na otú ịgbatị iPhone batrị >>
Bọtịnụ & Home ihuenyo
N'ozuzu, e wezụga ike button, Audio olu elu na ala button, na Android ekwentị nwere ọzọ 3 buttons. Ha na-na isi button, hapụrụ menu bọtịnụ na nri azụ bọtịnụ. Home ihuenyo Android ekwentị nwere ya isi ihuenyo na center, na i nwere ike peeji site ekpe ma ọ bụ aka nri. Otu kenka imewe bụ na Android ekwentị nwere wijetị, nke na-ahapụ gị ngwa ngwa ike iṅomi ihe atụmatụ ndị ị na-enwe na gam akporo ekwentị.
N'adịghị ka Android ekwentị, iPhone nwere nani a isi button ma e wezụga ike bọtịnụ na ọdịyo olu elu na ala bọtịnụ. Ọ bụrụ na ị ga-esi mee na-eji ihe Android ekwentị, ị pụrụ iche kemmekpa mgbe ịmafe si gam akporo ka iPhone. Home ihuenyo iPhone n'ụlọ ihuenyo bụ a bit dị iche iche si Android ekwentị. Mgbe ị na-slide mkpịsị aka gị si ekpe gaa n'aka nri Ị kpọghee ekwt gị iPhone, na iPhone n'ụlọ ihuenyo ga-gosiri na n'aka ekpe. Ị nwere ike slide ikike hapụrụ iji nweta ndị ọzọ meziri. Ọzọkwa, ị ga-aghọta na iPhone adịghị ihe ọ bụla wijetị.
Ndabere App & App Update
Mgbe abịa ndabara ngwa, Android ekwentị na-enye gị free ohere ị na-ahọrọ gị chọrọ ngwa ọdịnala na-ndabara na-enweghị dịrị. App update On gị Android ekwentị, i nwere ike na-eji ngwa emelitere-akpaghị aka. Ọ bụ n'ezie adaba na oge na-azọpụta.
N'ụzọ dị mwute, a nnukwu emezighị emezi na iPhone nwere bụ na Apple dị nnọọ chọrọ ya ngwa ọdịnala na-ndabere, dị ka Safari nchọgharị, mail ngwa, map ngwa. Ka ndị na-abụghị Apple ngwa ọdịnala dị ka ndabere, ị nwere jailbreak gị iPhone. A bụ otú jailbreak gị iPhone >> App update ọzọ emezighị emezi na-ahapụ gị ala bụ na ngwa ọdịnala na iPhone-apụghị kwalite-akpaghị aka. Kama nke ahụ, mgbe ị nwere ngwa-emelitere, ị ga-ahụ a ọnụ ọgụgụ na-acha uhie uhie n'elu nke App Store ngwa. Gaa App Store ngwa na enweta mmelite nwere gị chọrọ ngwa ọdịnala na-emelitere. A bụ ndepụta nke 17 kasị mma free iPhone ngwa >>
Mgbe ị na-Ịma Ọkwa, dị ka a ozi, a na-efu ekwentị oku ma ọ bụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịdọrọ na ihuenyo si n'elu na ala.
Iji ele na ngosi, ị dị nnọọ enweta ya. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ya, ị nwere ike ogologo enweta ya na slide ya site n'aka ekpe gaa n'aka nri. The iPhone ngosi center yiri Android ekwentị. I nwere ike dị swipe ala si n'elu ihuenyo ele ọ bụla ngosi gosiri n'ebe ahụ.
Ekwentị PC Nyefee
Android emeghe ọdịdị awade gị mfe ohere ya SD kaadị. Ịnwere ike ịnyefe music, video, photos, kọntaktị na akwụkwọ na site na na Android ekwentị effortlessly. N'adịghị ka Android ekwentị, Apple naanị-ahapụ gị iji mbupụ Igwefoto photos na kọmputa. Mbubata / mbupụ ọzọ data, dị ka music, video, ị nwere na-adabere na iTunes ma ọ bụ ụfọdụ ndị ọzọ ngwaọrụ.
Ọ bụla Android version abịa si, sochiri ụfọdụ onwunwu ọhụrụ igwe. Otú ọ dị, ọ na-ewe ogologo oge n'ihi na ị na-aga site wireless ụgbọelu tupu mmelite na-mma. Tụnyere Android ekwentị, iPhone iOS update amama na-adị nnọọ mfe. Mgbe e nwere ọhụrụ version, ị ga-ahụ na ọtụtụ na-acha uhie uhie na n'elu aka nri nke Isetịpụ akara ngosi. Tụgharịa na gị iPhone netwọk na enweta General> Software Update iji kwalite ọhụrụ iOS version.
Chọta My iPhone
Olee otú Jiri FaceTime
iTunes bụ Apple ukara desktọọpụ software, na-enyere ị na-ahazi music, photos, fim, ngwa, TV na-egosi, akwụkwọ na ndị ọzọ na gị iPhone. Ọ bụ a freeware, na ị nwere ike ibudata na nwụnye ya si Apple ukara website mfe. Na ya, ị nwere ike
Ịzụ ihe ọ bụla ị chọrọ n'aka iTunes Echekwala na mmekọrịta gị iPhone.
Imelite iPhone mgbe a elu iOS version dị maka gị.
Ndabere gị iPhone na kọmputa tupu iOS nweta nkwalite ma weghachi mgbe e mesịrị.
Họrọ ọkacha mmasị gị gụgharia redio ịnụ ọkacha mmasị gị music.
Ọ bụ ezie na iTunes ekere òkè dị mkpa na ijikwa iPhone, ị pụrụ ịhụ na iTunes nwere ụfọdụ nnukwu adịghị emezi emezi. Oge ọ bụla ọ syncs faịlụ gị iPhone, ọ ga-ewepụ ẹdude n'anya. Ihe a ọdachi. Ka njọ, ọ na-adịghị ekwe ka ị nyefee faịlụ, dị ka music, video na ndị ọzọ si iPhone azụ iTunes gwụla ma na ha na-zụrụ n'anya. Na nke a, ọtụtụ iTunes-dị ka software pụta, nke nwere ike ime ihe iTunes ada obere, dị ka Wondershare TunesGo, iExproler, SynciOS.
Dị nnọọ dị ka aha ya na-egosi, iCloud bụ a ígwé ojii ọrụ. Ọ na-ahapụ ị na-azọpụta gị ọdịnaya, gụnyere kọntaktị, music, photos, akwụkwọ na ndị ọzọ, ka ígwé ojii. Mgbe ị na-melite iCloud na gị iPhone, ị nwere mfe ohere ka ọdịnaya na ya.
Mụta ihe banyere iCloud >>
3. adịghị ichegbu
Na-eri nri ike gwụrụ nke mgbe nile ekwentị oku, alerts na Ịma Ọkwa. Ị na-adịghị na-ata ahụhụ na. Na gị iPhone, e nwere adịghị ichegbu ọnọdụ, nke na-echebe gị si na-jijiji.
Mgbata Ntọala> adịghị ichegbu. Mgbe ahụ, dị ka gị mkpa, ikpebi ma ọ ga-atụgharị na Manual, ndokwa, ekwe ka oku site na, ugboro ugboro oku na-agbachi nkịtị.
Mụta ihe banyere adịghị ichegbu >>
4. Hazie Ringtones
Chọrọ ka omenala ụdaolu? Ọ bụghị ihe dị mfe, ma ị ka nwere ike aka ya. Ebe a ga-amasị m na-egosi gị otú iji iTunes ka ụdaolu.
Mụta ihe banyere otú e si mee DIY iPhone ringtone >>
Nzọụkwụ 1: Gbaa iTunes na kọmputa gị ma pịgharịa gaa na ala listi ọkpụkpọ iji chọta gị chọrọ song. Na-ege ntị song ịhọrọ a 30-abụọ ma ọ bụ obere akụkụ nke song na-ringtone.
Nzọụkwụ 2. Right pịa ma ọ bụ ịchịkwa pịa song. Na ya adaala menu, pịa Get Info. Na mmapụta window, pịa Nhọrọ. Mgbe ahụ, jupụta na Malite Time na Kwụsị Time na nne Mmetụta ha. Pịa OK.
Nzọụkwụ 3. Right pịa ma ọ bụ ịchịkwa pịa otu song ọzọ. Na ya adaala menu, pịa Mepụta AAC Version. Mgbe ahụ, ahaziri song uche na-egosi na ndetuta egwu ọkpụkpọ. Ịdọrọ na dobe ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 4. ịgbanwe ndọtị .m4a ka .m4r. Ọ bụrụ na ị nwere ike kpọmkwem ịgbanwe ya, na-eso nke a. Gaa Ejikwa Panel> Ọdịdị na Personalization> nchekwa Nhọrọ> View> Uncheck Zoo extensions maka mara ụdị faịlụ. Ahụ na-aga azụ ka ahaziri song na-agbanwe ndọtị. Mgbe ahụ, mmekọrịta ndị ụdaolu gị iPhone site iTunes.
5. Chọta My iPhone
Gị iPhone na-efu na enweghị echiche ebe-ahụ na ya? Echegbula. Na Chọta My iPhone, i nwere ike iji ọzọ Apple ngwaọrụ iji chọta ya ma chebe data na ya. Dị nnọọ wụnye Chọta My iPhone ngwa gị ọzọ Apple ngwaọrụ. Abanye n'ime Apple ID na ị na-eji maka iCloud. Mgbe ahụ, Chọta My iPhone ga-achọ ma chọta gị efu iPhone on a map, igbachi ya,-egosipụta ozi ma ọ bụ wepu data na ya.
Mụta ihe banyere Chọta My iPhone >>
Enwe iji Google Ugbu a na gị ochie Android ekwentị na-eme ka olu iwu? Ugbu a na ọhụrụ gị iPhone, i nwere ike iji Siri dị ka onye nnọchi. Download Siri si iTunes App Store. Mgbe ị chọrọ iji Siri, ị nwere ike rụọ ọrụ ya site na-ejide n'ụlọ bọtịnụ ruo mgbe ị na-anụ abụọ beeps. Mgbe ahụ, i nwere ike ịjụ ajụjụ banyere kọntaktị, ihu igwe, kalenda na ntụziaka, jụọ ya melite emek ma ọ bụ na oti mkpu, ego nkiri showtime, na-eziga email onye, ​​na ndị ọzọ.
Mụta ihe banyere ihe Siri nwere ike ime n'ihi na ị >>
7. Olee otú Jiri FaceTime
FaceTime bụ ihe Apple ngwa na-enye gị ike isonye na a (n) video ma ọ bụ ọdịyo oku na onye ọ bụla nwere a na-akwado iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka n'elu WiFi ma ọ bụ cellular netwọk.
Aka FaceTime na gị iPhone, ị nwere ike ịga Ntọala> FaceTime. Tụgharịa na FaceTime. Mgbata Jiri gị Apple ID maka FaceTime na banye na gị Apple ID.
Iji jiri FaceTime na-eme ka a (n) video ma ọ bụ ọdịyo oku, ị pụrụ ịgbaso ndị na-esonụ ụzọ.
Iji na kọntaktị na ekwentị: Kpatụ Ndi ana-akpo ngwa gị iPhone ihuenyo. Chọta onye ị na-aga na-eme ka a oku na-akpọ ya. N'oge ekwentị oku, enweta FaceTime na-eme ka a (n) ọdịyo ma ọ bụ video oku.
Jiri FaceTime: Ebe a FaceTime audio / video oku site na iji gị na ndetu kọntaktị ma tapping ekwentị / video akara ngosi.
Mụta ihe Ama banyere otú iji FaceTime >>
Ịgbanwee si iPhone ka iPhone
Copy faịlụ site Nokia ka iPhone
Copy Ndi ana-akpo si Blackberry ka Android
Copy Ndi ana-akpo si HTC ka iPhone
Nyefee na Ndi ana-akpo si iPhone ka HTC
Detuo faịlụ site iPhone ka Computer
Bugharịa faịlụ site iPhone ka Mac
> Resource> iPhone> iPhone VS Android: nke onye ị na Dị ka mma?